June 2018 - Page 6 of 7 - Puntland Mirror Believable Media Website
June 6, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Arbaco ah ku soo laabtay caasimada Puntland ee Garoowe. Madaxweynaha ayaa magaalada Baydhabo uga qeybgalay shirkii amniga qaranka oo u dhaxeeyay masuuliyiinta sare ee Dowladda […]
Jowhar-(Puntland Mirror) Labo xildhibaan oo katirsan maamul goboleedka Hir-Shabelle iyo ilaaladoodii ayaa lagu dilay weerar gaadmo ah meel u dhow caasimada Soomaaliya ee Muqdisho shalay oo Talaado ahayd. Xildhibaanada ayaa saarnaa gaari yar oo uu […]
June 4, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) 27 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay Puntland, Soomaaliya, Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sidaa bayaan ku sheegay maanta oo Isniin ah. Duqeynta ayaa Sabtidii ka dhacday […]
Washington-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa tixgelinaya hoos u dhimid ku imaanaya ciidamadiisa holwgalada gaarka ah ka wada gudaha Soomaaliya iyo wadamo kale oo Afrika kuyaala, Jariidada New York Times ayaa ku warantay maanta oo Isniin ah. […]
Baydhabo-(Puntland Mirror) Shirka amniga qaranka ayaa maanta oo Isniin ah ka furmay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Masuuliyiinta sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa ka qeybgalay shirka. Shirku inta uu socdo […]
June 3, 2018 Puntland Mirror 0
Jaamacada Boosaaso ayaa markii hore lagu asaasay machad ahaan gudaha magaalada Boosaaso sanadkii 2006-kii. Muddo yar gudahood waxay noqotay jaamacad la aqoonsanyahay, oo buuxineysa dhammaan shuruudaha looga baahanyahay in ay noqoto haayad waxbarasho sare. Jaamacada […]
June 3, 2018 Puntland Mirror 1
University of Bosaso (UOB) was initially established as an institute in Bosaso town in 2006. Within few years it had become an accredited university, fulfilling all the required criteria of being a higher education institution. […]
Garoowe-(Puntland Mirror) 41 dagaalyahan oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay howlgal ka dhan ah Al-Shabaab oo ka dhacay Buuraha Caalmadow, Ciidamada Amaanka Puntland ayaa bayaan ku sheegay maanta oo Sabti ah. “Ciidamada Amaanka Puntland […]
Abuja-(Puntland Mirror) Sii hayaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeenka dalka Nayjeeriya Yemi Osinbajo ayaa shalay oo Axad ahayd u hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya, sida uu ku sheegay bayaan. Yemi Osinbajo, ayaa bayaan [...]